Saxiix 1 ee Ibraahim: Duceeyey - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Ibraahiim! Waxaa sidoo kale loo yaqaanay Abraahaam iyo Aabraam (NNKH). Dhamaan saddexda diimood waxay aaminsan yihiin jiritaanka Eebbe Yuhuudda, Masiixiyada iyo Islaamku waxay u arkaan mid mudan in la raaco. Carabta iyo Yuhuudda maanta dunida korkeeda ku nool waxay raadraac abtirsi isirnimo ka soo jeedaan wiilashiisa Ismaaciil iyo Isaaq. Oo wuxuu kaloo muhiim u yahay faraca nabiyadda Eebbe maxaa yeelay waa aayaadka aasaaska oo dhan nebiyaddii kale. Sidaas maxaa ku jiray oo uu lahaa, sameeyey, ama uu ogaa in loo oggol yahay in isaga ay ku leeyihiin door xitaa nebiyadii uu ka mid ahaa? Jawaabta tani waa mid aad muhiim u ah in aan eegi doonaa calaamada Ibraahim (NNKH) qaybo badan oo. Riix halkan inay akhriyaan calaamada Quranka iyo Tawreedka.
Waxaan ku aragnaa ayad ka mid ah Quraanka in Ibraahim (NNKH) wuxuu ahaa in ay leeyihiin ‘Qabiilo’ dad ah isaga ka soo farcamidoonaa. Dadkani ka dibna ahaayeen kuwo lahaan doonaa ‘Boqortooyo weyn’. Laakiin nin waa in uu haystaa ugu yaraan hal inan inta uusan yeelan ‘qabaa’ilo’ dad ah, iyo sidoo kale waa inuu haystaa meel ka hor inta dadkaasi yeelan karaan ‘Boqortooyo weyn’.
Ballan u qaaday Ibraahim (NNKH)
Mariska Tawreed (Bilowgii 12: 1-7) Muujinaysaa sida Eebbe u sii socotay fulinta dhamaystirran ee ‘qaboolooyinka’ iyo ‘Boqortooyadda weyn’ ka imaanaya Ibraahim (NNKH). Eebe isaga u yaboohay yabooh run ah oo uu aasaas u yahay qorshihiisa uu mustaqbalka. Ina keena aynu dib u dheehanee iyadoo sii faahfaahsan. Waan aragnaa in Eebbe ku yidhi Ibraahim:
2 “Waxaan kaa dhigi doonaa quruun weyn, oo waan ku barakayn doonaa; Waxaan ka dhigi doonaa magacaaga mid weyn, oo waxaad noqon doontaa barako. 3 oo waan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya, kan ku habaarana waan habaari doonaa; oo qabiilooyinka dhulka oo dhammu la adigay kugu barakoobi doonaan”
Weynaanta of Ibraahim
Dad badan ayaa maanta dunida galbeedka ah meesha aan annigu hadda ku noolahay ayaa iswaydiinaya yaab haddii ay jiraan waa Ilaah, iyo sida mid ogaan karaa haddii run ahaantii Isagu isku muujiyey si toos ah Tawreedka. Haddaba horteena waa yabooh, qaybo ka mid ah oo aan xaqiijin karno. Ugu dambayntan ayaa muujinaysa qoraal in Eebbe si toos ah ugu ballanqaaday Ibraahim (NNKH) in ‘waxaan ka dhigi doonaa magacaaga mid weyn‘. Halkan waxaan joognaa qarnigii 21aad haddana magaca Ibraahim/Abraahiim/Aabraam waa mid ka mid ah magacyada ugu badan ee adduunka taariikhdiisa laga aqoonsan yahay. Yaboohan waxa uu macno iyo taariikh ahaanba noqday mid rumoobay. Nuqulkii ugu horreeyey ee Tawreedka jira maanta waa ka Badda Dhimatay taasoo ah taariikhda ilaa 200-100 B.C (eeg Maqaalkayga haddii Sunnadda ka marag ah beddelid Tawreed, Zabuur, & Injil ama may). Taas macnaheedu waa in yaboohaasi leeyahay, ugu yaraan, la qoraal tan iyo wakhtigaas. Oo weliba waagaas qofka iyo magaca Ibraahim si fiican looma aqoon – oo kaliya in yar oo Yuhuudda kuwaasoo raacay Tawreed. Oo weliba sababtoo ah waxaan maanta ogaanay weynaanta magaciisa waxaan ka arki karnaa in fulintu ay timid oo keliya ka dib markii hoos lagu qoray, aan kahor ahayn.
Sidaas qaybtan oo ku saabsan ballantii Ibraahim ayaa hubaal ah in ay dhacday, sida iska cad waa in xitaa kuwii gaaloobay, taasina waxay na siinaysaa kalsooni weyn si ay u fahmaan qaybaha ka haray yaboohii Eebbe ee Ibraahim. Aan sii wado si ay u bartaan.
Mar kale, waxa aan arki karnaa yabooha ‘quruunta weyn’ oo ka soo jeeda Ibraahim iyo ‘barakadii’ Ibraahim. Laakiin waxaa jira wax kale iyo sidoo, barakada ma ahan oo keliya Ibraahim sababtoo ah waxay leedahay “dadka dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan” (Iyada oo loo marayo Ibraahim). Tani waa in ay adiga iyo anniga inaga dhigtaa in aan kor u fadhiisano iyo weliba aan foojignaano. Maxaa yeelay, adiga iyo anniga waxaan ka mid nahay ‘dhamaan dadka ku nool adduunka’ – iyadoon aan loo eegayn diinteenna, qoomiyadda aan ka soo jeedno, meesha aan ku nool nahay,halka aan bulshadda kaga beeganahay, ama afka aan ku hadalno. Ballanqaadkan waxaa ka mid ah qofkasta oo nool maanta! Inkastoo diimaheenna kala duwan, qowmiyadaha iyo afafku ay kala qaybiyaa dadka keena khilaaf, kanu waa ballantii aan ka gudbi lahayn waxyaalahan inta badan inna kala fogeeya. Sidee? Goorma? Waa maxay nooca barakadu? Tani si cad shaaca loogama qaadin laakiin calaamadan ka dhalatay yabooha waa mid macno ku samaynaysa adiga iyo aniga loona marayo Ibraahim (NNKH). Oo tan iyo markii waxaynu og nahay in qayb ka mid ah yaboohaasi rumoobay, waxaa leenahay kalsooni in qaybta kale ee ina khuseysaa sidoo kale yeelan doonaa fulin cad dhamaystir – waxa keliya oo aan u baahanay si aan u helno furaha una furno.
Laakiin waxaan dareemi karnaa in markii Ibraahim helay ballantii uu adeecay Eebbe iyo…
“Markaasaa Aabraam tegey sidii Rabbigu isaga u sheegay” (v. 4)
Joqraafiga safarkii Ibraahiim
Intee in le’eg buu ahaa safarkani ku aadan dhulkii ballanqaadka? Joqraafiga halkani waxa uu muujinayaa socdaalkiisii. Waxa uu asal ahaan ku noolaa Uur (maanta loo yaqaan Koonfurta Iraaq) oo u dhaqaaqay Xaaraan (Waqooyiga Iraaq). Ibraahim (NNKH) ka dibna waxa u socdaalay meesha waagaas loo yaqaanay Kanaan. Waxaad arki kartaa in tani ay ahayd safar dheer. Waxa uu ku safray awr, faras ama dameer sidaa darteed waxay ku qaadatay bilooyin faro badan. Ibraahim waa uu ka soo tagay qoyskiisa, noloshiisa raaxada leh ee (Mesobotamiya waqtigana ahaa xaruntii ilbaxnimada), ammaankiisa iyo in uu u safro dhul shisheeye oo uusan aqoon. Markaasaa waxaa taas, Tawreed inoo sheegayaa, markii uu ahaa 75 sanno jir!
Allabariyo xoolo sidii Nabiyadii hore
Tawreed ayaa sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa markii Ibraahim (NNKH) ku yimid Kanaan si nabad ah:
“Sidaas daraadeed ayuu halkaas meel allabari Rabbiga uga dhisay meel“(v. 7)
Meesha allabariga waxay noqon doontaa meesha, sida Haabil iyo Nuux Isaga ka hor, wuxuu bixiyey allabaryo dhiiga xoolaha ah oo uu u bixiyey Eebbe hortiis. Waxaan u aragnaa in ay tani tahay qaab ka mid ah sida nebiyadii u caabudi jireen Ilaah.
Ibraahim (NNKH) waxa uu halis geliyey noloshiisa isagoo markaas ku jiray intii ugu dambaysay noloshiisa oo uu u safro dhulkan cusub. Laakiin in uu sidaas sameeyo wuxuu uu gudbiyey yabooha Eebbe in la barakeeyo iyo in barakadu umad kasta gaarto. Taasina waa sababta uu sidaas muhiimka noogu yahay. Laakiinse calaamadiisu halkan kuma dhamaato. Waanu sii wadaynaa Calaamada 2 ee Ibraahiim qoraalkayaga kuxiga.
Tags:allabari Ibraahimbilowgii Yuhuuddabixid ee QuraankaIbraahim IslamIbraahim TawreedIbrahimIbrahim in al KitabIbrahim in BibleIbrahim in IslamIbrahim in TawreedIbrahim Islamibrahim iyo Saarahibrahim Nebi Biographyibrahim nebiga NNKHIbrahim SCWNabiga Ibrahim in TawreedNebi Ibraahim ee Kitaabka Quduuska ahNebi Ibraahim ku TawreedNebi IbrahimNebi story ibrahimnebiyadii Islaamkanolosha Nebi Ibraahimsheeko Nebi ibrahim noloshasidee YUHUUDDA bilaabay